Ndị uweojii Anambra: A gbagbughị ụkọchukwu n'Anambra - BBC News Ìgbò
Ndị uweojii Anambra: A gbagbughị ụkọchukwu n'Anambra
Image copyright Anambara Police Command
Ụkọchukwu David Chidiebere nke ụka a kpọrọ 'Grace and Power Prophetic Ministry', ọ bụ anụ a na-agba egbe ọ na-ata nri?
Akụkọ na-efegharị kwuru na ndị ji egbe ji mgbọ wụgbuo ya n'ụlọụka ya dị n'Ọka, Anambara.
A gbagbuola ndị na-agbanwe ego mmadụ anọ na Port Harcourt
Ndị omekome agbagbuola ndị uweojii anọ na Kaduna
Mana ndị uweojii Anambra steeti kwuru na akụkọ ahụ abụghị ezie.
Ha kwuru na Chidiebere gbalahụrụ ndị ji egbe wakpoo ya ma wụọ mgbọ n'ụgbọala ya n'okporoụzọ si Enugwu gawa Udi n'Enugwu steeti.
Na mkparịtaụka BBC na ọnụ na-ekwuru ndị uweojii n'Anambara bụ Haruna Mohammed nwere, o kwuru na a gbagbughị Pastọ Chidiebere, kama na e ji egbe gbakacha ụgbọala ya, ebe ụkọchụkwụ ahụ gbalagara na-emerụghị ahụ ọbụla.
O kwukwara na ọ bụghị n'Anambara steeti ka ndị omekeome ahụ wakporo ụkọchụkwụ ahụ, kama na ọ bụ n'okporoụzọ Udi dị n'Enugwu.
"Ọ bụghị eziokwu. Ihe mere bụ na n'ụbọchị Tọọzde bụ ụbọchị isii nke ọnwa Septemba nke 2018, ebe Elekere Itoolu nke ụtụtụ, ndị ji egbe amaghị ndị ha bụ wakporo Onyeamụma David Chidiebere n'okporoụzọ sị Enugwu gawa Udi n'Enugwu steeti, wụọ ụgbọala ya mgbọ mana ụkọchukwụ ahụ gbalahapụrụ na-emerụghị ahụ ọbụla.
"Iji mee ka o doo ewu na ọkụkọ anya, onyeisi uweojii ogige B' Division Awka bụ CSP Odion Ekeinde, gara leta ụkọchụkwu ahụ n'ụlọụka ya bụ 'Grace and Power Prophetic Ministry' dị na State Secretariat Road, Aroma, Ọka, ebe ya na ya sere foto."
Mohammed gara n'ihu dụọ ndị mmadụ ọdụ ka ha hapụ ige ntị na kepukepu ahụ na-efegharịnụ.
O nweghị onye ma ma ndị omekeome ahụ abụ ndị ojiegbeezu ma ha abụ ndị e zigara ka ha gbagbuo ya bụ ụkọchukwu na-ewu ewu n'Ọka maka ekpere ọ na-eme.
Bianca Ojukwu ga-azọ ọkwa sineti n'Anambra-South
China chọrọ inye Naịjirịa $60b
Ihe asaa nwere ike iduga gị nga ma i mee ya nwa gị
Lee ihe iri bụ arụ ma nwaanyị Igbo mee ya
Onye chọrọ ịzọ ọchịchị n'APC ga-akwụ nde 45
Crystal palace anyakasịala Man Utd ka gwongworo ike ụwa gwụrụ
Onweghi onye tọọrọ m kama a gara m n'ụlọ enyi m nwoke - Nwaada Anioma
Nwa Regina Mba ekwuola na obara nne ya ga-abọrịrị ọbọ